Waraysi fanaanka Rashid Bullo - BBC Somali - Aqoon Guud
Waraysi fanaanka Rashid Bullo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Maarso, 2013, 17:39 GMT 20:39 SGA
Heesihiisa ugu caansan waxaa ka mid ah Adigaa Haweeyaay.
Dhaqanka iyo Hidaha Soomaalida waxaa ka mid ah heeso, gabayo iyo ciyaaro.
Rashid Bullo wuxuu ka mid yahay fanaaniinta mudo ka badan nus qarni ku soo jiray fanka Soomaaliyeed. Heesaha uu leeyahay ee ugu caansan waxaa ka mid ah heesta Adigaa Haweeyaay, iyo hees lagu xiro idaacada Radio Hargaysa ee la yiraahdo Tani waa Hargaysa oo hirarka gaaban idinkala hadlaysa ee habeen waneegsan. Rashid Bullo wuxuu fanka ka bilaabay garaacida muusiga isagoo markii danbana noqday heesaa iyo mu'alif caan ah. Rashid Bullo oo hadda ka shaqeeya Radio Hargaysa gaar ahaan qolka kaydka ayaa waxaa waraystay toddobaadkan Wariyaha BBC Axmed Saciid Cige.